अध्यारोमा बसेर मोबाइल चलाउँदा स्वास्थ्य हुने समस्या यस्ता छन् - RAISUJAN.COM.NP
July 9, 2019 July 9, 2019 RAISUJAN
आजभाेलीका मानिसहरूका लागि माेवाइल पानी जत्तिकै जरूरी भईसकेकाे छ । माेवाइलबिना एकछिन पनि बस्न सक्दैनन् आजभाेलीका युवापुस्ता । अधिकांश मानिसहरु मोबाइल त्यो पनि स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
त्यसमध्ये पनि कतिपय यस्ता मानिसहरु हुन्छन् जो सुत्नुभन्दा अघि अध्यारोमा वा रातको समयमा स्मार्टफोनमार्फत काम गर्ने गर्छन् । जसबाट आँखा र मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ । अनुसन्धानले अध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउनु खतराजनक हुने बताएका छन् ।
मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगले हामीलाई धेरै नै हानी पुर्याइरहेको हुन्छ ! के असर गर्छ त, जान्नुहोस्
फोनलाइ पाइन्टको खल्तीमा सकेसम्म नराख्नुस यसले तपाईँको प्रजनन् क्षमता घटाउछ । मोबइललाइ मुटु नजिक पनि नराख्नुस् यसले मुटुको धड्कनलाई प्रभाव पर्छ ।
गर्भवती हुँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगर्नुस् । किनकी यसको असर विकसित हुँदै गरेको बच्चामा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसनले नराम्रोसंग असर गर्न सक्छ ।
पन्ध्र वर्ष भन्दा कम उमेर समुहका बालबलिकालाई मोबाइलफोन चलाउन नदिनुस् किनभने उनीहरुको बिकसित मस्तिष्कमा रेडियसनको धेरैनै नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
बालबालिकाको मृत्युको दोस्रो कारण मस्तिष्कको क्यान्सर (ट्यूमर) भइसकेको छ र यसको हुनुको पछाडी मोवाइलको अव्यवस्थित प्रयोग हो ।
मोबाइल फोनलाई भर्खर जन्मिएका बच्चादेखि टाढा राख्नुस् बालबालिकाको तालु पातलो हुनेहुँदा रेडियसन उनीहरुको मस्तिष्कबाट छिटो प्रशारण भई मस्तिस्क क्यान्सरको संभावना बढाउछ ।
मानिसको जीवनको अभिन्य अंग बनिसकेको मोबाइल फोनको रेडिएसनबारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ त ? मोबाइलको प्रयोगमा अभ्यस्त हुनेहरुले रेडिएसनबारेमा पनि ज्ञान राख्नु जरुरी छ । यो रेडिएसन कयौँ किसिमको हुन्छ भने यसले नै मानिसलाई बिरामी पनि बनाउन सक्छ ।
आधुनिक जीवनशैलीमा मोबाइल फोन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने बस्तु भइसकेको छ। हामी मोबाइलबिना थोरे समय पनि रहन सक्दैनौँ । तर तपाईँले कहिले यी मोबाइल फोनबाट निकाल्ने रेडिएसनबारे जान्नु भएको छ ? जसले केवल वातावरणमा रहने पशुपंक्षी मात्रै होइन मानिसको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याउँछ ।
आजभोली आँखा कमजोर नभएको मानिसहरु हुदैनन् । बच्चाको आँखामा समेत चस्मा लगाएकै हुन्छन् । कम्प्युटरमा लगातार बसी रहदा आँखा कमजोर हुने समस्या हुन्छ । निरन्तर मोवाइलमा हेरी रहदा पनि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जिवनको लागि निकै महत्वपुर्ण र नभई नहुने अंग हो ।
इष्टर्न हाइड्रो पावर भोजपुरको सस्थापक शेयर खुल्यो, कस्ले कति कित्ता पाउने ?